‘Aluhlehli udwendwe umakoti engadukile’ | News24
‘Aluhlehli udwendwe umakoti engadukile’
UMSUNGULI weMpucuzeko Maskandi Festival uXolani Mcineka uthi konke sekumi ngomumo ngomcimbi oyintandokazi, odume ngele-World Cup kaMaskandi. Lo mcimbi ozobanjelwa ePeople’s Park, eMoses Mabhida Stadium ngoMgqibelo, ulindwe ngabomvu ngabathandi bakamaskandi KwaZulu-Natal. Okuhle kubathandi balo mcimbi kulo nyaka wukuthi uxhaswe ngabakwa-Prasa ngakho-ke izitimela eziya kule nkundla zizobe zibathutha mahhala abalandeli kuzo zonke izindawo ezakhelene neTheku.
“Umcimbi uzoqala ngo-10:00 ekuseni kanti futhi kunesikhathi esibekelwe sona ukuba uphele ngaso ukuze izitimela zikwazi ukubuyisela abantu emakhaya. Izitimela zokugcina zihamba ngo-21:00 ebusuku,” kusho yena. UMcineka uthi sehle kakhulu isibalo samavukana kulo nyaka ngoba bahlangabezana nenkinga ngonyaka odlule amavukana emaningi kakhulu ukudlula abaculi abathandwayo.
“Kubalulekile ukuthi abantu bazuze ngemali abayikhiphile, ekugcineni le yi-world cup, kanti futhi kuyaziwa ukuthi akusiwona wonke umuntu othola ithuba lokudlala kwi-world cup, ingeyabakhethekile kuphela,” kusho uMcineka. UMcineka ubuye wathi lo mcimbi uzobe uhanjelwe yizikhulu zikaMasipala weTheku nabangabanye babaxhasi balo mcimbi kanye noNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko KwaZulu-Natal, uBongi Sithole-Moloi.